Nhau - Yakanyanya Masikati Masikati egirazi, majasi, mateki uye zvimwe zvipfeko zvekupfeka (2020): Yekutanga fashoni uye zvipfeko zvekuchengetedza zvakataurwa neRetail Zai.
Akanakisa Masikati makuru ezuva, majasi, mateki uye zvimwe zvipfeko zvekupfeka (2020): Yekutanga fashoni uye zvipfeko zvekuchengetedza zvakataurwa neRetail Zai.
Iyo 2020 yepamusoro yeGoridhe Mutambo yekutanga kwevarume nevakadzi fashoni, zvipfeko uye bhutsu kutengeserana, kusanganisira majasi epamusoro, mateki, magirazi ezuva uye zvimwe zvinoderedzwa pazvipfeko, shangu uye zvishongedzo.
Tsvaga akanakisa epamberi fashoni, zvipfeko uye shangu zvibvumirano paAmazon Prime Day, ayo anosanganisira anonyanya kufarirwa mateki, anomhanyisa shangu, madhirezi, majaketi, majuzi, uye magirazi ezuva. Zvinongedzo kune akakurumbira madhiri zvakanyorwa pazasi.
Chengetedza kusvika pa58% pazvipfeko zvekunze zvevarume, majaketi nemajasi kubva kumhando yepamusoro kusanganisira Calvin Klein, The North Face, Carhartt naColumbia paAmazon Prime Day sale
Chengetedza kusvika makumi mana nezviviri muzana pamabhachi evakadzi, majaketi, majasi uye mapea mapea kubva kumhando yepamusoro senge The North Face, Steve Madden, Columbia naCalvin Klein muAmazon Prime Day kusimudzira
Sevha makumi mana nemasere muzana paColumbia Yevakadzi Arcadia II Jacket paAmazon-Shell yepamusoro bhachi rine chinogadziriswa girazi remhepo, dhizaini inogadziriswa hem uye zippered handbag
Tenga Columbia Boy's Glennaker Rain Jacket paAmazon uye chengetedza kusvika pa43% - iyo isina mvura nylon shell inogara yakasimba uye inogona kumira mvura shoma kuti inaye
Sevha 41% pane yeColombian Men's Ascender Softshell Jacket paAmazon-Isina mvura uye isina mhepo mhepo Andean makushe akagadzirwa ne100% polyester
Sevha madhora makumi matatu pane Eddie Bauer Ms. Sun Valley Down Parka paAmazon-akagadzirwa e650-yakazadzwa premium pasi nehombodo-yakarongedzwa zipu muhomwe.
Sevha kusvika pa47% paColumbia Yevakadzi Foldback Isina Mvura uye Inonaya Jacket-Nylon dhizaini inochengetedza iwe kuoma uye kudzivirirwa kunyangwe mukunaya kwemvura
Tenga Ray-Ban flat lens lens oval magirazi uye uchengete 20% paAmazon-ane mafuremu esimbi uye UV yekudzivirira kupfeka
Tenga Ray-Ban Women's Blaze Round Sunglasses kuAmazon uye chengetedza 30% -nemapurasitiki furemu uye UV yekudzivirira kupfeka
Sevha makumi mashanu muzana paRay-Ban Blaze Wayfarer magirazi paAmazon-imwe yeakanyanya maumbirwo muRay-ban portfolio
Tenga Ray-Ban Blaze Double Bridge Square Sunglasses kuAmazon uye chengetedza 47% -nemavara ematare esimbi ane mafureti uye akapetwa kaviri.
Sevha 26% paOakley Men's Holbrook Square Sunglasses paAmazon-isingagumi echinyakare dhizaini inosanganisira yazvino Oakley tekinoroji.
Tenga Oakley Men's Flak 2.0 rectangular magirazi eAmazon uye chengetedza 32% -mapureza-asingadziviriri mafuremu akareruka uye akasimba, akasununguka uye anodzivirira zuva rese
Sevha $ 73 paOakley Men's Valve Rectangular Sunglasses paAmazon-iyo vharuvhu inonetsa-isinganetsi furemu, isina kureruka uye yakasimba, uye yakagadzikana kupfeka zuva rese
Tenga Oakley Men's Flight Jacket Rectangular Sunglasses kuAmazon uye chengetedza 21% -pa 100% UV kudzivirirwa kune ese UVA, UVB, UVC uye inokuvadza bhuruu mwenje, kusvika 400mm
Tenga Oakley Women's Split Time Metal Pilot magirazi ezuva kuAmazon uye chengetedza 25% -pa simba rakawedzerwa uye chinja kuti udzivise kuchinjika kana kushanduka.
Sevha madhora makumi masere nemasere paOakley Men's Mainlink Rectangular Sunglasses paAmazon-yakagadzirirwa mwenje wakajeka mamiriro, ichiita kuti nharaunda iratidzike yakajeka uye yakasikwa
Chengetedza kusvika ku44% paNike, Adidas, New Balance, ASICS uye Skechers sneaker pakutengesa kweAmazon Prime Day.
Chengetedza kusvika ku38% pane shangu dzevakadzi, shangu, shangu dzakakwirira uye shangu dzakapetana muAmazon Prime Day kukwidziridzwa-tinya iyi link kuti utore mitengo yezvazvino pane shangu dzevakadzi, kubva kushangu dzekufamba kuenda kune loafers uye loafers
Chengetedza kusvika pa43% pane shangu dzevana muAmazon Prime Day kusimudzira-ponesa pamateya, bhutsu, shangu neshangu dzevakomana nevasikana
Tenga New Balance yevarume crossover shangu paAmazon, chengetedza 22% -100% dehwe, kwese-kutenderera kutsigira
Tenga New Balance Yevakadzi Fuelcore Nergize V1 sneakers paAmazon, chengetedza 38% -100% synthetic fiber, yakashongedzwa dhizaini dhizaini
Sevha 26% paSkechers Varume Delson Camben Sneakers paAmazon-asiri-akatsvedza, mabhande epamberi, mitambo uye dhizaini dhizaini
Sevha pane ASICS Varume Gel-Venture Yekumhanya Shangu paAmazon-Premium insoles ine yakakwira kugadzikana uye yakanakisa manejimendi manejimendi
Tenga Skechers Ladies Go Joy Kufamba Shangu paAmazon uye chengetedza 40% -huremu uye inoshanduka 5Gen inoteerera cushioning
Sevha makumi mana nematatu pane Deer Stags Boys Oxford Shoes paAmazon-Nyoro, yakasimba mesh lining uye wingtip dhizaini
Sevha 44% pane Fila Yevakadzi Dhivhosi II bhutsu paAmazon-akagadzirwa eprimiyamu dehwe uye akareruka
Sevha pane ASICS madzimai gel kushambadzira shangu paAmazon-yakavimbika GEL-Venture® 7 inomhanya rutsigiro rutsigiro inokupa iwe zvakanakira iwe zvaunoda kumhanya kwese
Sevha 28% paSkechers Afterburn paAmazon-yakasimba uye yakashongedzwa nylon loop lace kuvharwa uye yakapetwa chitsitsinho kora uye rurimi rwekuwedzera nyaradzo.
Tenga Reebok vakadzi 'echinyakare dehwe Harman Run sneakers kuAmazon uye chengetedza 23% -stylish sneakers neEVA midsole inopa rutsigiro uye inogona kugara kune akawanda mafambiro uye kumhanya.
Chengetedza kusvika pa25% pane Steve Madden evarume veFenta fashoni shangu paAmazon-lace-up "zvakajairwa shangu" zvine marasha erabha, inowanikwa mune mashanu echinyakare mavara
Tenga PUMA Yevakadzi Carina Sneakers kuAmazon uye chengetedza kusvika ku42% -aseki ebhutsu akagadzirwa ne100% yekugadzirwa kweganda nematombo erabha.
Tenga Nyowani Balance Yevakadzi 608V5 Casual Inonyaradza Yekudzidzira Muchinjikwa Shangu paAmazon uye chengetedza kusvika ku31% -zvakanakisa kudzikama shangu dzekudzidzira neese-kutenderera kutsigira
Sevha kusvika pa32% paSkechers Work Cessnock sneakers paAmazon-anofema mesh uye bungee tambo uye isina-kutsvedza yerabha chete
Sevha kusvika pa43% pane Reebok yevakadzi echinyakare dehwe fashoni sneakers paAmazon-vintage chimiro ganda uye rabha mubatanidzwa chena uye chingamu ruvara
Tenga Under Under Armor Vana 'PreSchool Assert 8 Alternate Kuvhara mateki paAmazon uye chengetedza kusvika ku25% mukurema-kurema uye kugadzikana, ine hoko uye tambo tambo, zviri nyore kupfeka uye kubvisa
Chengetedza kusvika ku34% pane menswear uye fashoni paAmazon Prime Day kukwidziridzwa-tarisa madhiri achangoburwa pamusoro pehembe dzevarume, masweatshirt, majaketi, majasi, majini, bhurugwa, zvikabudura, chipfeko chemukati uye mbatya dzemitambo.
Chengetedza kusvika ku40% pane zvipfeko zvevakadzi uye fashoni muAmazon Prime Day kusimudzira-tinya pane iyi link kuti uwane ruzivo rwechizvino pamusoro pemisoro yevakadzi, majuzi, majasi, majaketi, madhirezi, majini, bhurugwa, masiketi, marunda, mbatya dzemitambo, zvipfeko zvemukati, kurara uye zvipfeko Discount zvekupfeka
Chengetedza kusvika pa58% pazvipfeko zvevana paAmazon Prime Day kusimudzira-chengetedza majaketi, mbatya dzemitambo, mapyjamas uye zvipfeko zvemukati zvevakomana nevasikana
Tenga Wrangler Authentics Varume's Nyaradzo Flex Chiuno Jean paAmazon uye chengetedza makumi maviri muzana -zvakajairika netambo yakatambanudzwa
Nakidzwa ne 35% dhisikaundi pane yakasununguka yevakadzi Ab mhinduro paAmazon-6 homwe masitaira mune premium yakasarudzika tactile denim
Tenga Calvin Klein Yevakadzi Yemazuva Ano Cotton Bralette paAmazon uye chengetedza kusvika ku41% -Breathable donje rinosanganisa bhurera neRacerback tambo
Tenga vakadzi vaRevi-vakakwira vane ganda rakakora paAmazon uye chengetedza 40% -gara pamusoro pechiuno uye mutete pasi kuburikidza nehudyu nezvidya
Sevha kusvika pa51% nekutenga shasha yejuzi yechirume yehembe T-shati paAmazon-ine iconic C chigamba kuruboshwe ruoko
Sevha kusvika pamakumi matatu nematatu pane yaVakadzi vaRevhitiko Classic Bootcut Jeans paAmazon-gara pachiuno uye nyore kupfuura nepakati pehudyu nezvidya.
Sevha kusvika pa41% paChampion yevarume suede jogger sweatpants paAmazon-dehwe inosungirirwa kunze uye yakanyorovera mukati.
Tenga Calvin Klein yevanhurume yekubata polo shati paAmazon kuchengetedza kusvika 62% -ine UV kudzivirirwa uye yakarukwa ne Ultra-yakanaka shinda yekupa mweya uye kufema.
Sevha kusvika ku52% paAmazon's Champion Vakadzi Powerblend Boyfriend Crew-V-mutsipa ruzivo pamutsipa uye yakashongedzwa raglan sleeve.
Uri kutsvaga dzakakurumbira uye dziri-kudiwa shangu, zvipfeko uye fashoni zvinopihwa? Dzvanya apa kuti utarise ese ma transaction sarudzo paAmazon "Prime Day" peji.
Kukwidziridzwa kweGolden Day kunongogara kwenguva pfupi. Retail Zai rinowana makomisheni ezvekutenga zvakagadzirwa uchishandisa chinongedzo chakapihwa.
Chiitiko cheAmazon chePrincess chegore rose rekutenga chinotora kwemaawa makumi mana nemasere, zvichipa kuchengetedza kwakanyanya kwezviuru zvemhando yepamusoro.
Hauna nhengo yeAmazon Prime? Tanga muedzo wezuva-makumi matatu wepachena izvozvi uye tora mukana wekusimudzira kwePrime Day.
Unogona kuchengetedza mari yakawanda panguva yePrime Day, senge majaketi, mbatya dzezhizha, misoro uye maT-shirts, mateki ane fashoni, mateki uye zvishongedzo (zvakadai sewachi nemagirazi ezuva). Kunyangwe iwe uchitsvaga shangu, mbatya kana magirazi, Amazon inogona kusangana nezvinodiwa zvako. Muchikamu chemafashoni chevakadzi, iwe unowana akawanda akasiyana hembe, shangu uye zvishongedzo. SL Fashions uye BTBFM ingori mamwe emhando dzakawanda dzinopa madhirezi akasiyana panguva dzakasiyana. Semuenzaniso, SL Fashions 'tuxedos inokodzera kwazvo mapato asina kujairika, mapato emahofisi, mapato emabiko, michato, nezvimwewo zvishongedzo zvakaita semagirazi ezuva, mabhegi nemawachi zvinopihwawo.
Mubazi rezvefashoni revarume, iwe unowana zvakare sarudzo dzakasiyana muhembe, zvishongo, shangu nezvimwewo. Kubva pamabhutsu kusvika kubhutsu, loafers kusvika kushangu, munhu wese anazvo. Kana iwe uchitsvaga emhando yepamusoro sneakers, saka Adidas, Lacoste, Sperry naTommy Hilfiger mamwe acho. adidas varume Grand Court sneakers vane iyo yakasarudzika runako rweadidas, ichivaita akasiyana-siyana.
Amazon yakabata chiitiko chayo chikuru chekutenga kusvika nhasi paPrime Day gore rapfuura. Nhengo dzePrimary dzinogona kunakidzwa zvinodarika miriyoni imwe chete zvitadzo.
Unoda zvimwe zvipfeko zvevarume nevakadzi, shangu uye fashoni zvinhu? Dzvanya apa kuti utarise chisarudzo chese dhizaini pane peji reAmazon re "Prime Day" rekusimudzira peji.
Nezve Retail Zai: Retail Zai rinogovana nhau nezve e-commerce kutengeserana. Senhengo yeAmazon Associate Retail Zai, unogona kuwana mari kuburikidza nekutenga kwakakodzera. Bata: Andy Mathews (andy@nicelynetwork.com)
Akaundi accountant yeSan Francisco akakurukura nezvekukosha kwehutungamiriri hweBiden kumahofisi ekudyara mukutaurirana kwese nevatengi.
Vashandisi vasina kuisa odha pane chero chikuva cheJD vanogona kugamuchira macomponi ekudzora! Nekadhi rako reVisa, tinya kuti ubhadhare paJD.com kekutanga uye unakirwe nemhedzisiro!
Kambani iyi yakati Lee Kun-hee, uyo akavaka Samsung Electronics kuita hofori yepasi rose muma smartphones, semiconductors neTV, akafa neSvondo mushure mekurara muchipatara kweanopfuura makore matanhatu nekurwara kwemoyo neSvondo. Lee ane makore 78 gore rino. Akagadzira iyo Samsung Boka kupinda mumusangano mukuru muSouth Korea uye akazove munhu akapfuma muSouth Korea. Jeong Sun-, CEO wekambani yekutsvagurudza kambani Chaebul.com, akati: "Kukwira kunoshamisa kwaLee muKorea uye kubatana kweSouth Korea mukudyidzana kwenyika kunofananidzira zvekuti kufa kwake kuchayeukwa nevazhinji veKorea.
Harry Markopolos (Harry Markopolos), aimbove nyanzvi yezvigadzirwa akatendeukira kune muongorori akazvimiririra wezvemari akazvimirira, akawana $ 65 billion Bernie Madoff Ponzi scheme, asi haana kufuratirwa neC SEC Kwemakore mapfumbamwe. Semutsoropodzi wevamiriri veUS, Harry ikozvino anoona nzvimbo yekuongorora uye indasitiri yeinishuwarenzi seyakakura nyaya yekubiridzira yezvemari.
Nekadhi reVisa, unogona kunakidzwa kusvika pamakumi maviri% kuderedzwa pakutenga kuGlobal Trends Dhipatimendi! Tarisa uone kutsva kutsvagirwa kwemafashoni online zvitoro senge Mytheresa uye Giglio.com!
Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, AMD, Caterpillar, Comcast, GE, Ford, Pfixer, Visa, UPS, Exxon Mobil, Twitter nemamwe makambani vakashuma zvavakawana mukota yechitatu.
Zviri nyore kutenga masheya, asi zvakaoma kutenga masheya akakodzera pasina zano rakaedzwa nguva. Saka, ndechipi chakanakisa stock yekutenga kana kuisa pane yekutarisa runyorwa izvozvi?
Musika wekutengesa unogona kuenda nevatungamiriri vakaita saMicrosoft naTesla. Nesarudzo dzava kusvika uye ma coronavirus kesi akawedzera, iri raive svondo remari yepamusoro.
Batsira nekukurumidza kuti utsigire sangano revapoteri reUN, kuitira kuti vapoteri vawane makiti ekukurumidzira kuti vabate mwaka wemvura uye vavaponese kubva kunjodzi!
Ndeipi nzira yekudyara yakamira muyedzo wenguva? Kukura kwekudyara. Wall Street nyanzvi dzinotenda kuti masheya ane akawandisa matarisiro tarisiro anoratidza mamwe emanikidza emasheya. Uku kukura kwekukwanisa kuri pamusoro penzvimbo iripedyo, uye aya mazita achawana kudzoka kwakakura muna 2020 nekupfuura. Izvo zvakati, kutaura zvishoma, kutsvaga masheya anowira muchikamu ichi kunogona kunetsa. Vaongorori vanotenda kuti zano rimwe chete ndere kutora danho kumashure, tarisa pamufananidzo muhombe, uye tarisa kumakambani ane kukura kwenguva refu zvichibva mukubudirira kunoshamisa gore-kusvika-zuva. Tichiisa izvi mundangariro, isu takashandisa dhatabhesi yeTipRanks kuti titarise matatu masheya ekukura ayo akanyanya kukosheswa nevanoongorora. Masheya ese matatu akawana kukura kwakanyanya mu2020 uye vakagadzirira kuramba vachikwira. Pennsylvania National Game Company (PENN) Kutanga, isu tiri vePennsylvania National Game Company, iyo inove uye inoshandisa mitambo yemitambo uye yekumhanyisa uye emavhidhiyo emitambo yekupedzisira mabhizinesi muUnited States. Iro zita rakwira 146% gore-kusvika-zuva, asi vamwe vaongorori veWall Street vanotenda kuti kuchine mafuta akawanda mutangi. PENN ichangobva kuzivisa yayo yechitatu kota mhedzisiro, izvo zvakapfuura zvaitarisirwa. Iyo kambani inotarisira mibairo yemubhadharo kuti iyo kota iwedzere neanopfuura mazana mapfumbamwe emapoinzi, uye yakagadziridzwa EBITDAR inokura ne5% gore-ne-gore, kunyangwe kana mari iri pasi pe10% gore-ne-gore. Muongorori wevashanu-nyeredzi Joseph Greff akaudza vatengi kuti "JP Morgan Chase" yakati: "Iyo indasitiri yemitambo yekutamba yakagadziriswa muna Chivabvu / Chikumi yakaenderera kusvika mukota yechitatu, uye mari yaive nani pane yaitarisirwa. Pane imwe nguva yakadzvanywa kudiwa Mushure mekudzokera kune zvakajairwa, uye kubvira iko kwekutanga kweECVID kushanda kwave nani, mashandisiro emari haana kana kukwira. Takambofungidzira kuti mwero wekukura wakadzikira. ” Achitaura izvozvo, Greif akabvuma kuti zvakapihwa yakakwira mutengo wemitengo, vamwe vamwe vaongorori vanga Vasiya kuderedzwa kumashure ”. Zvisinei, iye achiri kutenda kuti "kukosha uye kukurudzira ramangwana". Vaongorori vakati: "… Kune kukakavara kwehondo mukufunga kwevatengesi. Isu tinotenda izvi zvine hutano kune masheya uye zvinotoda kuti masheya arambe achikwira; isu tinotenda kuti vechinyakare vemitambo equity vanoita havasati vadzvinyirirwa zvachose. Tinotenda kuti varimi havana chokwadi nezve kugona kwaPENN kukwikwidza neDraftKings, Fanduel, Kesari Varaidzo, MGM / GVC, nezvimwewo saizi yepeni yePENN inogona kubhadhara mari yekuwana yevatambi vezvemitambo vachitamba, asi isu tinotenda, Tichifunga izvo kutsvaga mari kwakaunganidza madhora mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emamiriyoni, njodzi yemakwikwi aya yakadzikiswa mukati mematanho ane chinangwa. ” Kunyanya kukosha, PENN ichangobva kuvhura iyo Barstool Sports kubhejera app muPennsylvania. Greff akasheedzera kuburitswa uku "kuchikurudzira maererano nemashandisirwo evhoriyamu uye kushambadzira," uye zvakaratidza "mukana wenzira yakasarudzika yekuwana mugove." Uye zvakare, iko kukurumidza kweBarstool Sportsbook kuri kuwedzera. Zvinotonyanya kukosha, Greff anotenda kuti nhabvu yemitambo iriko uye nharaunda yeGaming yakafanana nekukwira kwemisika yematunhu muma1990, apo nyika dzine kushomeka kwebhajeti dzakatendeukira kumanyuko matsva emari, semitambo yemabhoti erwizi kubatsira kuvhara mabhajeti avo. kushomeka. Panyaya iyi, muongorori akati: "Tinotenda kuti nyika yega yega ine tarisiro yakafanana kuUSSB neG iGaming, uye PENN ichave imwe yevakakunda. Isu tinofarira iyo yepasirose-inotamba mitambo / yemitambo kubheja / iGaming pateni muUS uye tinoona nzvimbo yekukura. . ” Zvakanaka, hazvishamise kuti Guva rakagara nemaBulls. Kunze kwekupa chiyero che "kuwandisa", akaisawo mutengo wemadhora mazana masere nemasere emari. Kana chinangwa ichi chikazadzikiswa mukati memwedzi gumi nemiviri inotevera, varimi vanogona kuwana 32% yekudzoka. (Kuti utarise rekodhi yaGreif, tinya pano.) Ndezvipi zvimwe zveWall Street zvinoti? Zvipfumbamwe zvinotenga, zvitatu zvinobata uye kutengesa kumwe kwakapihwa mumwedzi mitatu yekupedzisira. Nekuda kweizvozvo, PENN yakagamuchira "yepakati kutenga" yekubvumirana chiyero. Zvichienderana neavhareji yemutengo we $ 76.77, mutengo wemari ungakwira ne22% gore rinouya. (Ona Penn National Gaming stock ongororo paTipRanks.) Redfin (RDFN) Redfin yakatanga nemepu-yakavakirwa pakutsvaga nzvimbo uye yakawedzera chigadzirwa chayo kugadzira mitambo yemhuri, madhiri uye maitiro ekubata nekukurumidza uye nyore. PaWall Street, vamwe vanhu vanofunga kuti zita racho haringori pamusoro pekuwedzera kwekuda kweCOVID, uye iyo 113% yegore-kusvika-kudhara kuwana ingori mavambo. Kunyangwe RDFN yakabvisa yakasimba yechitatu-kota fungidziro, varimi vakagumburwa nemhedzisiro. Jake Fuller weBTIG akataura kuti mutengo wemari ungangodonha nekuti "zvinotarisirwa zvakakwirira uye kuwedzerwa zvine mwero pamwero wemari ingangoita 2%" uye "varimi vanomhanyisa vanowanzo kupa mubairo mutinhimira unotungamirwa nevhoriyamu, nepo RDFN ichinyatsosarira kumashure pane izvi tarisiro." Fuller anotenda kuti RDFN haisiyo inotariswa nevanhu vazhinji, izvo zvinoratidza kuti varimi vanogona kunge vasina kuona kuburitswa kwemihoro. Nekudaro, iye anofunga kuti Wall Street inogona kupotsa chikamu chakakosha chepuzzle. Muongorori wevashanu-nyeredzi akataura: "Chingafuratwe apa ndechekuti RDFN yakawedzera mwero wekomisheni pasina chakakanganisa chiyero chekushandurwa, izvo zvinowedzera zvikuru tarisiro yemubhadharo wakakura weRFN." Kusvika pano, achaita Iyo yakazara 2021 purofiti inotarisirwa kuwedzera ne47%. Tichitarisa padhuze neruzivo rwakadzama rweiyo quarter, RDFN yakawana kudiwa kwakasimba uye real estate services services yakakura 36% gore-ne-gore. Webhusaiti traffic uye transaction vhoriyamu zvakare yakawedzera mwedzi-pa-mwedzi. Nekudaro, izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyo yekumusoro inotungamirwa nemari yemutengo wega wega. Fuller akati: "Izvi zvakakosha nekuti zvinoratidza kuti mwero wekomisheni unotarisirwa unopedzisira wabatsira." "Maererano nehuwandu hwedu, real estate services mari kubva ku1.68% yeGTV mukota yechitatu ya2019 uye chikamu chechipiri cha2020 1.78% yakawedzera kusvika inofungidzirwa 1.85% mukota yechitatu ya2020. Mapoinzi mana-akakwirira akakurisa anoratidza traffic yakakwira munzvimbo ino. Kunyangwe hazvo zvakaoma kuongorora kuomerera kwekudiwa, kuwedzera kwemitengo uye miganho yepundutso iri nani inofanira kugadzikana "akadaro Fowler. Zvinopindirana netariro yake, Fuller akatsigira mombe, achidzokorora chiyero chekutenga uye mutengo wemari weUS $ 65. Ichi chinangwa chinoratidza kuvimba kwake mukukwanisa kweRFFN kuwedzera ne45% gore rinouya. (Kuti utarise Fuller's track rekodhi, tinya apa.) Paunenge uchienda kune dzimwe nzvimbo dzeWall Street, pfungwa dzakatonyanya kupatsanurwa. Mumwedzi mitatu yadarika, 6 inotenga, mishanu inobata uye 1 kutengesa yakagoverwa. Sekureva kweWall Street, RDFN ndeyekutenga kwepakati. Ivhareji yemutengo we $ 50 zvinoreva 11% kumusoro. (Ona Redfin stock ongororo paTipRanks) Vertiv Holdings (VRT) Semumwe wevatungamiriri vepasi rese vanotungamira, software uye vanopa sevhisi, Vertiv Holdings yakabatsira kusimudzira musika wakabatana wedhijitari masisitimu, mune huwandu hukuru hunokosha Iyo data inoda inopfuudzwa, kuongororwa, kugadziriswa uye kuchengetwa. Wall Street yakati yakwira 71% kusvika parizvino gore rino, uye panogona kunge paine zvimwe zvakawanikwa. Kunyangwe kana mutengo wemari ukakwira zvakanyanya, Wolfe Research muongorori Nigel Coe achiri kutenda kuti njodzi / mubairo mamiriro akanaka. Akatsanangura kuti: "Tinotenda kuti Vertiv ishoko risingawanzo rakawanda rinogona kukwezva vashambadziri vakasiyana-siyana: kambani yekukura iri pakati nepakati iyo inogona kupa kukura kunokwezva kwemubhadharo uye iri pasi peboka repamusoro soro." Kana zvasvika kuVRT Pamugwagwa wekukura, misika yayo mikuru yekupedzisira inzvimbo dzematare uye nharembozha. Idzi nzvimbo inzvimbo idzo Coe inotarisira kuzadzikisa kukura muna 2020 na2021, pamwe nekusagadzikana kwenguva refu-kwenguva refu kunounzwa nekuenderera kuri kuwedzera kwekuwedzera kwedata uye kukwidziridzwa kwe5G. Uye zvakare, inotungamirwa nekuedza kwekuchengetedza yakatarwa mitengo nguva dzese kuburikidza kwakasiyana mashandiro ekuvandudza uye kudzikisa kusanzwisisika kwesangano, manejimendi akaronga nzira yekuwedzera purofiti kune mazana mashanu emapoinzi. "Ichi chinyorwa chakabudirira kutumirwa nasachigaro mukuru David Cote panguva yaakange ari kuHoneywell, izvo zvinotipa chivimbo chekuti zvinyorwa zvakafanana zvinogona kuendeswa kuVertiv," akadaro Cohen. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti VRT yakabuda mukota yechipiri ya2020, ine mambure chikwereti cheinosvika US $ 2.1 bhiriyoni uye net chikwereti / EBITDA inosvika 4.2 nguva. Kunyangwe pamucheto wepamusoro weiyi renji, Coe anotenda kuti iyo bharanzi sheet inogona kudzima nekukurumidza. Kusvika pano, iye anofungidzira kuti kusvika 2023 iyo mambure chikwereti / EBITDA chiyero chakapetwa kaviri, ipapo mari yasara inosvika bhiriyoni rimwe remadhora ekuUS. "Hatifunge parizvino kuti Vertiv inyaya yakajeka yekuendesa mari, asi izvi zvinogona kubuda mukati menguva ya2022 / 23-tinogona kuona zviitwa zvekutora kusimudzira kugona kwayo mumunda wekuparadzira magetsi uye neiyo DCIM layer. Dzimwe sarudzo dzinogona kuvepo dzinosanganisira kubviswa kwemari yemvumo (izvi zvirimo parizvino zvinoratidzwa mune yedu yakasanganiswa share kuverenga kuverenga uye nzira iyo migove inogovaniswa, izvo zvichawedzera mukana wekuti ive muridzi wemasangano. "Hatikwanisi kufuratira chokwadi chekuti michina mikuru yemagetsi Kukura kwehukama hwekudyidzana hwakagadzwa nevatori vechikamu mumusika, vatori vechikamu havasi ivo vanokosha munzvimbo dzinotorwa mashoko." Zvese zvinhu zveVRT zvaita kuti Coe idzokerezve huwandu hwayo hwekunze. Achiri kudaidza sarudzo, akaisa mutengo wemadhora makumi maviri nemaviri, zvichireva mukana we22% kumusoro. (Kuona rekodhi rekodhi raCoe, tinya apa) Vamwe vaongorori vanobvumirana here? vari. Mumwedzi mitatu yekupedzisira, chete 4 chaiyo "kutenga" ratings dzakaburitswa. Naizvozvo, meseji iri pachena: VRT kutenga kwakasimba. Tichifunga kuti avhareji yemitengo iri $ 20.75, mutengo wemari ungakwira ne10% gore rinouya. (Ona Vertiv Holdings stock analysis paTipRanks) Disclaimer: Maonero akataurwa muchinyorwa chino ndeaya chete eanoongorora zvikuru. Izvo zvirimo ndezvekureva chete. Usati waita chero dura, zvakakosha kuti uite ongororo yako wega.
Iyi svondo mihoro muhomwe uye data rehupfumi mushumo zvichaburitswa mukupera kwesvondo rino, uye mazhinji masheya eFAANG anonzi ashe mushure mekuvhara neChina.
Muvhiki inopera Gumiguru 22, mari yechimbadzo yemitero yakawira pasi kurekodha. Zvinotarisirwa kuti COVID-19 uye zvematongerwo enyika zveAmerica zvicharamba zvichikanganisa vhiki rino.
Suntory yakasarudzika fomula yemafuta ehove "DHA & EPA + Sesame Ming E", makapisi mana pazuva, anogona kubvisa dambudziko remwoyo, kudzoreredza hutano hweropa, kudzamisa kurara, uye kuve njodzi mutaundi! 10% kubviswa kwenguva yakatarwa, usarasikirwa nayo!
Rondedzero yemari yekuwana yechitatu yekota ye AMD (AMD) yakarongerwa kuburitswa mushure mekuvhara neChipiri, inova nguva inonakidza yeindasitiri ye semiconductor. Iyo Wall Street Journal yakashuma kuti AMD (AMD) inoronga kushingairira kuwedzera bhizinesi rayo kuburikidza neanogona kuwanikwa (XLNX) (XLNX). Panguva imwecheteyo, mukwikwidzi wayo mukuru (INTC) anga achishanda nesimba kuti arambe achiburitsa tekinoroji dzepamberi dzekugadzira dzinodiwa kugadzira semiconductors emhando yepamusoro.
* Nyaya yekuvhara yevhiki ino yaBarron inoongorora tarisiro yezvidhoma zvechinwiwa munyika yepashure pedenda. * Zvimwewo zvinyorwa zvinokurukura nezvekukwira kwemisika iri kubuda uye kupi kwekuwana mibairo yekushandisa. * Pamusoro pezvo, pane tarisiro yezvekurapa zvivakwa zvekudyara, vatengesi vemuzvitoro, uye cancer-centric biotechnology. Andrew Bary's nyaya yekuvhara "Nei Coca-Cola Ichizotangazve" inoratidza kuti kambani yakatambura zvakanyanya nedenda iri Coca-Cola (NYSE: KO). Nekudaro, sevanhu pavanodzokera kune zvakajairwa munyika yejekiseni, simba repasirese rechinwiwa chemarudzi akawanda chingaite kuti ikwire kumusoro kwakakwirira. Reshma Kapadia's "Aya emashamba ari kubuda anogona kukwikwidzana neAmerican giants", akadaro, mushure memakore gumi ekuderera, misika iri kubuda yemakambani iri kuwedzera. Makambani mazhinji eInternet uye ehutano mumisika yekukunze kwenyika vachiri munzira yekukura, vachipa mikana mikuru. Alibaba Group Holdings Limited mutengo wemari yakaitika Mu "Three Medical Trust Funds Yekukohwa Kudzoka muHutano Hwehutano", Darren Fonda (Darren Fonda) yakaratidza kuti iyo real estate Investment trust makambani anoshanda munzvimbo dzehutano ane nzvimbo yekukura. Tsvaga zvinofarirwa naBarron nezve Physicians Realty Trust (NYSE: DOC) uye vanoverengeka vezera rake. NextEraEnergy Inc. (NYSE: NEE) inokwira 26% gore rino, zvinoenderana ne "8 yekupa yakachengeteka masheya" uye nekuenderera kuri kuita kugadzirwa ", munyori: Lawrence · C · Strauss (Lawrence C. Strauss). Asi kumwe kunhu munzvimbo yekushandisa, hapana kushomeka kwekuderera kwekugadzirwa uye mamwe matanho ekudzivirira ari pasi. Xcel Energy Inc. (NYSE: XEL) ingori imwe yesarudzo dzaBarron. Muna Eric Savitz's "Usasiye Big Technology Stocks. "Kunetsekana kwakawedzeredzwa", nei zvichionekwa kuti kunyangwe kusahadzika kukakwidziridzwa pasi pekuwongorora kwakasimba, zvikonzero zvichiri Apple (NASDAQ: AAPL) uye Microsoft (NASDAQ: MSFT)) Makambani anga achigadzira nekuita, asi pane kunyengedza nekushusha. Onawo: Musika wenzombe waBenzinga wevhiki: Boeing, Netflix, Pfizer, nezvimwewo Jack Hough akataura "Kutsvaga zororo Kutenga fakes", yakakurukura kuti sei Mbudzi ingave iri nguva chaiyo yekutengesa kurasikirwa kwemitero, senge Kohl's Corp. (NYSE: KSS) uye Macy's Inc. (NYSE: M). Nike (NYSE: NKE)? Kutanga, Sprout Varimi 'Musika (NASDAQ: SFM) ndiye akahwina COVID-19, uyezve akarasikirwa neCOVID-19. Naizvozvo, Teresa Rivas's "Sprout Inventory yakagadzirira Kwakanaka kudzoreredza." Mushure mekurasikirwa neinenge kota yemutengo wayo mumwedzi mitatu yapfuura, iyo Phoenix-based supermarket cheni opareta anotarisirwa kuwedzera? Mu "tarisiro pamusoro peTesla, telemedicine uye genomics shanduko" In, Emily Liu akagovana nei iyo ARK CEO investimenti iri mudzidzi wekuvhiringidza hunyanzvi, nei Tesla (NASDAQ: TSLA) achasiya Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER) uye guruva inogadzikana nevamwe. Bill Alper Bill Alpert "Musangano weCancer Ungangorega Aya Biotech Masheya." Pamusangano wegore rino weENA, vatsvagiri vegomarara vakaita musangano pamhepo kuti vaone dhata nyowani pamishonga iri kuongororwa nemakambani mazhinji ebiotech. Dzidza nezveBarron Nei uchifunga kuti Mirati Therapeutics Inc. (NASDAQ: MRTX) ichave imwe yemakambani anotariswa kwazvo. Mune ino svondo Barron Vhiki nevhiki: * Uchabhadhara zvakadii maererano neBiden naTrump chirongwa chemutero Mari Inoshandiswa * Marongero emutero wemumiriri wemutungamiri wenyika achabatsira-nekukuvadza hupfumi - zvingarevei bhuruu wave pamusika wevasungwa * Nei 2021 ichave kunetsekana kune vanoita mari * Nei maekisesaizi epamusoro emaindasitiri akakosha kutarisa * Diziri Chii chinoratidza kuti musika ungatumire hupfumi * Hondo muhondo inotevera yemotokari yemagetsi * Yabhadharwa mari yekutenga iri kuwedzera * Ko maChinese zvisungo zvakachengeteka sezvisungo zvemunyika inguva yekuyedza Thai stock market Panguva yekunyora, munyori ari mumatanda ari pamusoro Hapana chinzvimbo. Tevedza Benzinga paTwitter kune dzese dzazvino nhau huru uye mazano ekutengesa. Ona rumwe ruzivo nezve Benzinga * Dzvanya apa kuti uone sarudzo yaBenzinga yekutengesa * Nzombe yemusika weBenzinga svondo rino: Boeing, Netflix, Pfizer nezvimwe. * Svondo rapfuura vanozivikanwa vanoona zvemukati: Carnival, Citigroup uye zvimwe (C) 20 20 Benzinga.com. Benzinga haipe zano rekudyara. kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Trifecta Masheya anozivisa mabhegi emagetsi neChitatu chega chega, uye panogona kunge paine mikana inonakidza yekudyara munguva pfupi. Tichishandisa tekinoroji kuongorora kweaya masheya machati, uye pazvinenge zvakakodzera, zvichibva paTheStreet's Quant Ratings'zvinoitwa zviito uye ratings, takaburitsa mazita mashanu. Kunyangwe isu tisingatarise kuongorora kwakakosha, isu tinotarisira kuti chinyorwa ichi chinopa varimi vanofarira mumatura vane nzvimbo yekutanga yakanaka yekuwedzera basa rechikoro kuzita.
Mwaya madota pagungwa kana magadheni ekurangarira kurasa madota nenzira ine nharaunda uye inochengetedza. Ronga kumberi, zivisa yako mhuri nezvezvaunoda, uye nyoresa kuCentral Rejista yeGreen Funerals.
Dutch pension hofori PGGM yakapeta zvakapetwa mari yayo muPayPal stock uye yakatenga zvikamu zveCisco neActionivision mukota yechitatu. Yakagura Qualcomm's stock.
Muvambi weAlibaba Jack Ma akati nemugovera kuti runyorwa rwechipiri rweChinese fintech hofori Ant Group richava rakakura kwazvo pasirese zvichienderana nemitengo yakatarwa neChishanu manheru. Akataura paBund Summit muEastern Financial Center yeNew York kuti: "Ino inguva yekutanga kuti mitengo yezvikamu zvakakura munhoroondo yevanhu ive yakatarwa kunze kweNew York City." Nerutsigiro rweChinese e-commerce hofori Alibaba, Svosve anorongera Izvo zvichange zvakanyorwa pamusika we STAR muHong Kong neShanghai mukati mevhiki.
PayPal kuvhura network yayo kune Bitcoin uye cryptocurrencies inochinja mitemo yemutambo, asi nhau idzi dzinovanza rakakura uye rakakosha meseji.
Hang Seng's nyowani online mutero-inobviswa gore rinopa rinopa makore gumi ekuwedzera akagadziriswa mari uye inovimbisa 1.73% -2% yemukati mari yekumisazve. Zvinongotora anenge maminetsi gumi kunyorera inishuwarenzi pamhepo uye chiite nekukasira.
Kugovaniswa uye purofiti hazvichisiri izvo zvakakosha zvikonzero zvevatengesi kutenga kana kugara mumakambani emafuta. Kunyangwe kudzoka kuchiri kiyi, varimi vachiri kuda shanduko pamberi pa2020
(Bloomberg) -kuna Leon Nhema, zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera. Muvhiki rapfuura, kambani hombe yekudyara yeVatema, Apollo Global Management Inc. (Apollo Global Management Inc.) yakatarisana nedambudziko rimwe mushure meimwe, ndiko kuti, iye nemutadzi wepabonde Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein) Mutungamiri Hukama hwemakumi emakore. Dare rake revatungamiriri rakaraira ongororo yekunze naBlack iye. Ipapo yePennsylvania pension fund yakamisa mari nyowani-Connecticut yakaita zvimwe chete. Mumwe mukuru chipangamazano-muchengeti wegedhi achizadzisa chitsidzo chemabhizimusi emadhora zana nemakumi masere emadhora-akakurudzira vatengi kuti vadzokere shure, nepo mumwe achifunga zvakafanana. Vatengi vakafarira yakanakisa Wall Street mibairo kwemakore vari kutarisisa hukama hwavo naApollo. Pakutanga mwedzi uno, chirevo muNew York Times chakamutsa kuongororwa kweEpstein. · Maxwell (Ghislaine Maxwell) haina kuiswa chisimbiso uye kupihwa kutariswa kutsva. Sekureva kwevanhu vanoziva nezvenyaya iyi, vamwe vatengi havatendi kuti ongororo yakaitwa nekambani yemutemo Dechert LLP inokwana kujekesa zita raVatema, uye kudziisa mari idzva kunogona kukuvadza Apollo painenge ichiedza kuenderera. Simudza $ 20 bhiriyoni pamari dzinoverengeka nyowani. Iyo nyonganyonga-inokonzeresa kusagadzikana mumusika wechikwereti ndiyo inonyanya kuita mukana wekambani wekudyara, unozivikanwa nekutenga mabhizinesi anotambudzika. Vanhu vanoziva nezvenyaya iyi vakati muna Kubvumbi Apollo arikutsvaga kutora mukana wekusagadzikana kwemusika nekudyara muzvikwereti zvakavanzika. Dambudziko riri kukura raMutema rinoratidza shanduko mune zvematongerwo enyika epasirose, nemari hombe ichinyanya kutarisisa nharaunda nenzanga. Uye hutongi hwakakosha kwazvo. Iko kutarisisa kutsva kunoreva kuti kunyangwe pakati pezvinonyadzisa, kunyangwe tarisiro yekudzosa inobhadhara inogona kunge isingakwezve zvakakwana. "Kunyangwe mashandiro achagara ari chinhu chakakosha, handicho chega chinhu," akadaro Gerald O'Hara, muongorori kuJefferies Financial Group Inc. .. "Mune dzimwe nzira, isu tinoda kupa zvibodzwa kuitira kuti tifambe zvakanaka uye kambani ine hunhu. ” Bloomberg yakashuma neChishanu kuti mupi wezano rekudyara Aksia akaudza vatengi kuti vasawedzere mari kuna Apollo. Connecticut yakati yaizomisa matsva matsva mukambani. Pakutanga svondo rino, Pennsylvania Public Schools Staff Retirement System yakati yaizomisa kwenguva pfupi mari yekuwedzera muApollo, uye chipangamazano weCambridge Associates ari kufunga kusakurudzira kambani kune vatengi vemudyandigere. Nezve nhau dzekuti Epstein akasungwa gore rapfuura, kunetsekana kwevatengesi kwakamutsiridzwa nemushumo weNew York Times. Mushure mekubatwa nemhosva yekutsvaga musikana wechidiki kuita chipfambi mu2008, akaendesa makumi mashanu emamiriyoni kuna Epstein. Dhora. Chinyorwa hachina kupomera Mutema kutyora mutemo. Kubva iyo nyaya yakaburitswa munaGumiguru 12, mutengo wechitoro waApollo wadonha ungangoita 12%. "Takazvipira kwazvo kuvandudza kujekesa," akadaro Apollo mune chirevo neChishanu, achiona kuti Mutema anga achitaurirana nevatengesi nguva dzose. "Kunyange Apollo haana kumboita bhizimusi naJeffrey Epstein, Leon akakumbira kuongororwa kwakazvimirira kwekunze kwehukama hwake hwepamberi naVaEpstein." Nhema akaudza Apollo mwedzi uno Tsamba yakabva kune mudiki waakaroorana naye akataura kuti akazvidemba zvikuru nekuita kwaEpstein. . Nhema akataura kuti akatendeukira kwaari mutero, kuronga zvivakwa uye nyaya dzerudo, uye hapana chinhu muNew York Times mushumo unopikisana netsananguro dzekare dzehukama hwake. Zvimwe: Leon Black's Epstein anongedzera kumushandirapamwe wekutsvaga mari uyo unotyisidzira Apollo Investors vakatemwa zvachose kubva kuna Apollo nekuti mari yemari yakazvimiririra inowanzo kuvharira mari kwemakore mazhinji-vanhu vazhinji vari kuda kuwana kudzoka kwakanyanya Pasi pechirevo chekuyera. Vatengesi vatatu, avo vasina kuda kudomwa nemazita, vakati kunze kwekunge zvakawanikwa mukuferefeta zvanyanyisa, vatengi vanogona kuzopedzisira vasarudza kutsvaga kumwe kunhu. Nekuda kwekudzoka nerupo kwekambani, kubviswa kwevatengi kunonyanya kunakidza. Bloomberg yakashuma muna Ndira kuti Apollo's flagship private equity fund yakavhurwa kune vanoita mari muna 2001, negoho repagore re44%, asi kunyangwe ivo varimari vane shungu dzekudyara mari yakawanda muhumende hwakavanzika vanozodzoka May vangasarudza kuiendesa kune vamwe nzvimbo. Partner Sarah Sandstrom (Sarah Sandstrom) akati: "Uyu ndiwo mukwikwidzi wemakwikwi, uye tinoenderera mberi tichiona chimwe chinhu mukutsvaga mari. Chinhu ichi, munzira dzakawanda, chakanyanya kudarika kuita kwezvematongerwo enyika, kwete kuita mari yekutsvaga mari. ” KuCampbell Lutyens, iyo kambani inobatsira yakazvimirira mafemu emari kusimudzira mari. "Uri kutaura nyaya yako wega nekuvaka hukama nevatengesi." (Wakawedzera chirevo chaBlake chemberi mundima 12.) Zvezvinyorwa zvakadaro, ndapota shanyira Bloomberg.com uye Nyorera izvozvi kune anovimbwa nenhau dzebhizinesi. © 2020 Bloomberg Zvinyorwa
Kurega basa kunogona kunge kusiri iko kunetseka kwevechidiki vazhinji, asi kunofanirwa kunge kuri. Izvi zvinodaro nekuti mushure memakumi emakore ekubatanidza, mari diki diki nhasi dzinogona kuwedzerwa kuenda kumari yakakura mune ramangwana. Iyo Roth IRA ipfungwa yakanaka yekutanga.
Post nguva: Oct-26-2020